> Resource > iPhone > Sidee soo saaro fariimaha qoraalka ka iPhone
Sidaas oo ay tahayna ay hareerahooda fiiriyeen in aad hesho si ay u soo saaro fariimaha ka iPhone si fudud ah in la akhriyo qaab kombuutarka? Halkan jooji. Maqaalkani waxa uu ku saabsan yahay in aad soo bandhigto awood Lugood Saaxiibkiis, oo Macdan kartaa fariimaha ka iPhone fudayd.
Waa Wondershare TunesGo (Windows). Iyada oo ay caawimaad, waxaad eegista Macdan karaa MMS, SMS iyo iMessages iyo lifaaqyada ay aad iPhone 5/4 / 4s / 3GS in PC aan ka kaaftoomi kasta. Intaa waxaa dheer, waxa ay awood aad soo saaro fariimaha in TXT, XML iyo HTML files. Sidaas darteed, waxaad si fudud u daabacan kartaa fariimaha ka soo markaad u baahan tahay.
Download software iyo isku day saarida fariimaha qoraalka ah ka iPhone
Sida loo soo saaro fariimaha qoraalka ah ka iPhone
Gashato aad kombuutarka. Waxaa Orod, oo uu suuqa kala xiriir muujinaysaa ilaa shaashadda PC.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in PC la cable USB ah
Iska aad iPhone xiran PC ka deeruhu cable USB ah oo wuxuu galay. In wax waqti ah, TunesGo ogaan doonaa iPhone. Markaas, sida aad ka arki, si aad iPhone lagu soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Warbixiinta fariin qoraal iPhone
In geedka buugga bidix, guji "SMS". Daaqadda maamulka SMS ah, eegista dooran qoraalka fariimaha, MMS oo iMessages in aad rabto in aad soo saaro. Markaas, guji "Dhoofinta in". Marka liiska hoos-hoos u muuqataa, doortaan qaab file ah. Sida iska cad, waxaa laguu ogol yahay inay soo saaro fariimaha in faylka la HTML, TXT ama XML. Markaas, dooro gal on your computer si loo badbaadiyo fariimaha soo bixiyay.
Taasi tutorial ka fudud oo ku saabsan soo saarida fariimaha ku iPhone. War sow ma aha fudud?
Ka sokow soo saarida fariimaha, TunesGo ku siinayaa awood dheeraad ah si aad iPhone si fiican loo maamulo.
Dhoofinta music iyo video on iPhone in computer ama Lugood Library . Waxaad isticmaali kartaa software si ay u dhoofiyaan oo dhan ama soo xulay videos iyo music ay info, sida ratings, qashanka iyo ciyaaro dacwadood, in computer iyo Lugood Library.
Beddelaan wax audio iyo video inay iPhone qaabab saaxiibtinimo. software ka caawiyaa si loogu badalo AAC, OGG, WMA, FLV, MKV, AVI iyo ka badan si uu MP3 ama MP4.
Dib sawiro aad iPhone Camera Roll oo Photo Library . Waxay kuu ogolaanaysaa photos xulay gurmad ama galalka aad iPhone in kombiyuutarka. Ka sokow, si aad u Photo Library dari kartaa sawiro la waayi maayo in ay sawiro hadda ka jirta Photo Library.
Abaabulaan xiriirada on xasuusta telefoonka, iCloud, Exchange iyo iwm dhoofinta dhan xiriirada aad iPhone ee xasuusta, iCloud, Yahoo !, Exchange iyo xisaab kale si PC , Outlook, Windows Live Mail iyo Windows Cinwaanka Book. Way fududahay in la isku darsamaan koobi xiriir la software this.
Isku day TunesGo soo saaro fariimaha ku iPhone hadda!